IINTSUKU ZOBOMI BETHU: UMTSHATO KAERIC KUNYE NONICHOLE (UKUVELA) NGOKUPHELA KOKONWABA - IINKQUBO ZETV
Enye yeenkqubo zeTV ezinde kakhulu kwihlabathi. Imihla yoBomi bethu iyasasazeka ukusukela ngo-1965
Enye yeenkqubo zeTV ezinde kakhulu kwihlabathi. Iintsuku Zobomi Bethu Iyasasaza ukusukela ngo-1965. Umboniso uza kuzisa izinto ezithile kuthi. Funda ngakumbi ukuze wazi izinto ezongezelelweyo malunga nomboniso.
Yintoni yonke le mpikiswano ngomtshato ka-Eric noNichole?
Sonke siyazi ukuba uEric noNichole bazakutshata, kodwa njengesiqhelo, kukho iingxaki kunye neemvakalelo ezichaphazelekayo emtshatweni womntu wonke. Ngeli xesha sifumana uEric egumbini lakhe elihleli ngaphezulu kwentselo kwaye elila kwileta kamakhulu uCaroline.
Ngelo xesha umama wakhe u-Marlena ubuyela ekhaya emva kweseshoni yakhe ye-manicure, kwaye uHolly ungena naye. Ngokukhawuleza emva kokuba uMarlena esekhaya, ubona uloyiko ebusweni bukaNichole. UMarlena unengcamango ecacileyo yokuba unyana wakhe akanakuba ngcono ngaphandle kukaNichole; ke, uhlala apho ukusombulula iingxaki zakhe.
Yintoni le serum yokuhombisa malunga nayo yonke into?
UKate ukwigumbi lokuncinwa apho uVivian elayisha isirinji nge-serum. UVivian ufaka i-serum kumzimba kaKate. UKate unombulelo kuVivian nge-serum xa uVivian esithi makangabuleli kuba wayengazi ukuba le serum yayiyindlela efanelekileyo.
U-Kate ucaphukile kwaye uthi, kuthekani ukuba kunokutyhefa umzimba wakhe kwaye umbulale. Inkxalabo ibaluleke kakhulu. UVivian ubuza ukuba uKate angazithunga iindlovu ezipinki kwimibono yakhe.
Umboniso webhaleyi kaGwen kunye neChad
Unxila uGwen noChad babenelinye ibali xa uAbigail wayefika azibonele indlela aziphatha ngayo uGwen. Bobabini babonakala bethandana, kwaye kwabakho iingxaki kubudlelwane bukaGwen. Okokugqibela, sinokubona umtshakazi nomyeni e-pub besenza izifungo kunye.
UEric uvakalisa uthando lwakhe Kumfazi wakhe omtsha kwaye uthi akanakuphila ngaphandle kukaHolly naye. UNichole wehla iinyembezi ezimbalwa zovuyo kwaye uchaza indlela adibana ngayo noEric kwaye akanakuphila ngaphandle kwakhe.
Emva kwesivumo sothando, bobabini babotshelelwa kwizifungo zomtshato. Kwangelo xesha, kukho into eyenzekayo phakathi kukaGwen noAbhigali enzima.
Ngaba uXander angalahlekelwa nguSarah ngokulungileyo?
Emva kokuba uSarah efumanise ukuba ubuhle bakhe benze isivumelwano noJan, ulindelo lukaSara luye lwacaca kuXander. Uthe ndifuna ukuba uyazi ukuba xa ubuyela kwiindlela zakho zakudala, walumkisa, andizukunyamezela kwakhona.
Nangona amazwi kaSarah esitsho ezindlebeni zakhe, ngekhe kube lula kuXander ukuwutyeshela umnqweno wakhe wokufuna ukuziphindezela nxamnye nemesis uPhilip.
Abalandeli bacinga ukuba akazukubaleka kwisizathu sakhe, kodwa eyona nto incinci aza kuyenza kukugcina uSarah ephuma kuyo.
Masilinde ukubona ukuba kwenzeka ntoni kulo mboniso. Alithandabuzeki elokuba iya kuba luluhlu oluhle kakhulu lokuzinkcinkca-ukubukela ukuba awukabikho.
amathambo alungileyo ixesha lesi-6
isiphelo: umhla we-winx wokukhutshwa komhla we-2
Ngaphezulu komhla wokukhutshwa kwe-s4